Ọbụna Nnukwu Bomụ nwoke echefuru Usability! | Martech Zone
Ọbụna Nnukwu Bomụ nwoke echefuru Usability!
Achọrọ m ide mkpirikpi ederede na ụfọdụ nsogbu njirisi njiri ike achọpụtara m na ngwa ole na ole.
Dabere na Wikipedia, na mmekọrịta mmadụ na kọmputa na sayensị kọmputa, iji ọrụ eme ihe na-ezokarị aka n'ịdị mma na nghọta doro anya nke e ji mepụta mmekọrịta na mmemme kọmputa ma ọ bụ weebụsaịtị.
Nke mbu m gha nye bu ihe eji eme ihe banyere ya Ibe obibi Google. Ọ bụrụ na ị gbakwunye mpaghara Google Reader na ibe obibi Google, ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Enwere; agbanyeghị, otu okwu na-acha ọkụ: akara 'agụọla ihe niile' njikọ ahụ dị n'okpuru njikọ iji mepee Google Reader.
Oge ole na ole ugbu a, apịrị m njikọ na-ezighi ezi na ndepụta m niile na-akpaghị aka na ọkwa na agụla ha. Nke a bụ egwu usability. Aga m agba Google ume iwepu njikọ a FAR na njikọ ndị ọzọ.
Ihe atụ nke abụọ bụ Microsoft Ntinye, ebe bọtịnụ Hichapụ maka email dị n’akụkụ bọtịnụ Junk Email. Microsoft Entourage dị ka Outlook maka OSX, mana ọ nweghị nhọrọ ọ bụla iji bugharịa bọtịnụ ahụ. N'ihi nke a, agbakwunyere m ozi ịntanetị na mberede na folda Email Junk m na mberede. Iji mezie nke ahụ, m ga-ehichapụ iwu ọ bụla Junk Email, chọta email ahụ na folda ozi Junk Email m, wee megharịa ya na Igbe mbata m. Ọchị!
Abụ m otu n'ime ụmụ okorobịa ndị hụrụ n'anya ịhazi na ịhazi ihe niile n'ime ngwa. Ekwenyere m na ha abụọ bụ ihe atụ ebe ịhazi ihe mere ka ọ nwee isi - mana ọ bụghị usoro. Ọ dị mkpa ịghọta etu ndị ọrụ si eji ngwa gị ka i wee nwee ike ịkwụsị mmejọ na-amaghị ama site na nhazi usoro adịghị mma.
Ghọta nke a na WordPress, onye na-arụ ọmarịcha ọrụ nkewapụ ihe ndị na-abụghị otu. Rịba ama na Zọpụta ma gaa n'ihu Na-edezi na Save bọtịnụ dị n'elu (nke bụ ntọala nke ụdị post) na Hichapụ Post a bọtịnụ dị n'akụkụ ala n'akụkụ aka ekpe… tere aka nke ukwuu.
Nnukwu ọrụ, WordPress!
Have nwere ihe atụ nke egwu Usability mbipụta na ngwa ị na-eji?
Bubata nri Google Reader gị na ọkacha mmasị Technorati
Ọ dịghị ụbọchị ọmụmụ ka mma! Ndị na-agụ nri 500!
Apr 18, 2007 na 12: 37 AM
obere mara eziokwu: Abụ m ihe kpatara nhichapụ bọtịnụ na-acha uhie uhie.
maka amaghi m ka esi agu ihe di iche na adi na ihichapu save
Apr 18, 2007 na 3: 14 PM
Ma ọ bụ ọchịchịrị isi awọ maka ndị na-acha uhie uhie. 😉
Ọnye na -bụ Thor Schrock
Apr 18, 2007 na 9: 52 AM
N'ezie, ọ bụrụ na ị na-eji WordPress 'free mba ọrụ na IE7 na ị na-agbalị mụbaa "Nhọrọ Excerpt" ngalaba, ọ na-adịghị n'ụzọ zuru ezu na-agbasa. Nke a nwere ike ịbụ glitch karịa a useability nsogbu, ma ọ dịghị ihe na-erughị, ọ pụrụ ịbụ manụ.
Apr 18, 2007 na 10: 57 AM
Ihe ọ bụla dị na myspace.
Wes, nke ahụ mere m ụkwara ọchị ma chịkwaa ọchị. Ikwuru nke oma!